မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: June 2011
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:48 PM0comments Links to this post
UNITED NATION မှတင်ပြသော မြန်မာပြည်တွင်းဘိန်းထုပ်လုပ်မှု အစီရင်ခံစာ
မြန်မာပြည်တွင်းဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါသည်။ အခြားဘိန်းထုတ်လုပ်သော တိုင်းပြည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းဒေသအလိုက်ထွက်ရှိမှု၊ တစ်နှစ် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဘိုး၊ မိသားစုတစ်စုခြင်း စီ၏ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုမှဝင်ငွေ စသည်ဖြင့် နှစ်အလိုက်တင်ပြထားမှုများ ကိုမူရင်းအတိုင်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 9:50 AM0comments Links to this post
KIA လိုင်ဇာ သိမ်းပိုက်ရန် မြန်မာက တရုတ်သို့ ခွင့်တောင်း
Monday, 27 June 2011 20:55 KNG
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)ဌာနချုပ် လိုင်ဇာအား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန်ကိစ္စ မြန်မာစစ်အရာရှိများမှ တရုတ်စစ်အရာရှိသို့ ခွင့်တောင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၂၃၊ ကြာသပတေး ညက မြန်မာစစ်အရာရှိများမှ တရုတ်စစ်အရာရှိကို တရုတ်နိုင်ငံ ယုနန်ပြည်နယ် မန်ရှီ၌ သွားရောက်တွေ့ခဲ့ဆုံစဉ် ယခုကိစ္စတောာင်းဆိုခဲ့ကြောင်း မန်ရှီသတင်းရပ်ကွက်က ဆိုသည်။
KIA ဌာနချုပ် လိုင်ဇာ။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာစစ်တပ်များ တရုတ်နယ်စပ်တွင် အ၀င်အထွက် သွားလာလှုပ်ရှားခွင့် တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေသတွင်းတရုတ်စစ်အရာရှိကြီးများနှင့် နေပြည်တော်မှ မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိများ၊ လားရှိုးမှ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်အရာရှိများ၊ ကောင်းခါးအခြေစိုက် ကချင်ကာကွယ်ရေးတပ် KDA အရာရှိတချို့ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ရွှေလီမြစ်အတိုင်းချီတက်လာသည့် မြန်မာစစ်တပ်များ တရုတ်နိုင်ငံထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
KIO လိုင်ဇာဌာနချုပ်နှင့် KIA တပ်မဟာ ၃ ဒေသကိုတိုက်ခိုက်ရန် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် မထုနော်ဦးဆောင်သော KDA တပ်များပူးပေါင်းသွားရန်လည်းရှိသည်ဟု တရုတ်နယ်စပ်အာဏာပိုင်များပြောသည်။
KDA မှ ကချင်ကာကွယ်ရေးတပ်များကို အသုံးပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၂ ချက်ကိုလည်း မြန်မာအရာရှိများက တရုတ်ကို ရှင်းပြသည်ဟုဆိုသည်။ လူမျိုးရေးကိုရှောင်လွဲရန်နှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ KIO လိုင်ဇာဌာနချုပ် ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ရေး မြန်မာစစ်တပ်၏ အားထုတ်မှုသည် လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုအသွင်ကို ဆောင်နေသဖြင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ရန် ခက်ခဲစေသည်။
KIA အားတိုက်ခိုက်မည့်အပေါ် တရုတ်က တစ်စုံတစ်ရာပြောဆိုခြင်းမရှိသော်လည်း မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KDA တပ်များ စစ်ဆင်ရေးအတွင်း တရုတ်နယ်မြေအားဖြတ်သန်းခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု တရုတ်အာဏာပိုင်များနှင့် နီးစပ်သူများ ပြောသည်။
လူအင်အား ၈၀၀ ကျော်ရှိသည့် KDA တပ်များ လိုင်ဇာနှင့် တပ်မဟာ ၃ ကို သိမ်းပိုက်ရန် ရှေ့တန်းသို့ ချီတက်သွားကြပြီဟု KDA နှင့်နီးစပ်သူများပြောသည်။
ဇွန် ၉ ရက် ဆန်ဂန်တိုက်ပွဲအပြီး ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ပြည်တွင်းစစ်ပြန်ဖြစ်လာသည်။ စစ်ကြောင့် မြန်မာအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှ ဒုက္ခသည် ၂၀၀၀၀ ကျော် KIO အုပ်ချုပ်သည့် တရုတ်နယ်စပ်သို့ တိမ်းရှောင်လာခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်က ခေါ်ယူမေးမြန်း နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းနှင့် ပေါ်တာဆွဲမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ထွက်ပြေးလာရခြင်းဖြစ်သည်ဟု တိမ်းရှောင်လာသူများပြောသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 9:08 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:17 PM0comments Links to this post
Shan war -
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:41 PM0comments Links to this post
Wednesday, 22 June 2011 19:29 KNG
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)နှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့၏ စစ်ပွဲမငြိမ်မသက်မှုကြောင့် ဒုက္ခသည်များဆက်လက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
လိုင်ဇာမြို့တွင် မျိုးလောတ်ဝံလီးစခန်း၊ မနောဝင်းစခန်း၊ နံပတ်(၃) ဈေးကွက် စခန်း၊ ဖုံလုံယန် စခန်း၊ နောင်ဧခူးစခန်းစသည့် ဒုက္ခသည် စခန်း (၅)ခု၌ ဇွန် (၂၁)ရက်နေ့ KIO စာရင်းအရ (၁၃၀၀၀) ကျော်ခိုလှုံနေကြောင်း ၎င်းစခန်းတွင် ဆေးကုသပေးနေသည့် ဆရာဝန် တစ်ဦးဆိုသည်။
မြန်မာအစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေမှ တရုတ်နယ်စပ် ကေအိုင်အို ဌာနချုပ် လိုင်ဇာသို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိနေသော ကချင်ဒုက္ခသည်များ။
ယင်းဒုက္ခသည်များအား ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)မှ တစ်ယောက်လျင် တစ်နေ့ ဆန် နို့ဆီခွက် (၂)လုံးပေးကာ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ဒေသခံ (NGO)များမှ ဆေးဝါးကုသပေးနေသည်။
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွင်လည်း စစ်ဘေးထွက်ပြေးလာသည့် အယောက် (၈၀၀)ကျော်သည် ဝိုင်းမော် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ခရစ်ယာန် သာသနာကျောင်းများတွင် နေထိုင်နေကြောင်း ဝိုင်းမော် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာတစ်ဦးပြောသည်။
တရုတ်-လွယ်ဂျယ် နယ်စပ် တရုတ်ဘက်ကမ်း လားရင်းကျေးရွာတွင်မူ ဒုက္ခသည် (၅၀၀၀) ခန့် ရှိနေပြီး မထန်ရွာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများမှာ (၁၅၀)ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းဒုက္ခသည် စာရင်းမှ သိရသည်။
တော၌ ခိုလှုံနေသူများမှာဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီးမိုးဆက်တိုက် ရွာသွန်းနေခြင်းကြောင့်လည်း အမိုးအကာမရှိသဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသည်။
မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော်-လွယ်ဂျယ် ကားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ရှိ ဒေသခံများဖြစ်ကြပြီး ဒုက္ခသည် ၂၀၀၀၀ ကျော် KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံနေကြသည်။ တစ်ချို့မှု လိုင်ဇာတစ်ဘက်ကမ်း တရုတ်ပြည်သို့ သွားရောက်နေထိုင်ကြသည်။
ဇွန်(၉)ရက်နေ့မှ မိုးမောက်မြို့နယ် ဆန်ဂန်ကျေးရွာတွင် နှစ်ဖက်ကြားပစ်ခတ်လာသည့် စစ်ပွဲမှာယခုဆိုလျင် ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင်ပင် KIAမှ ဗုံးဖေါက်ခွဲနေပြီဖြစ်သည်။
Last Updated ( Wednesday, 22 June 2011 19:41 ) ﻿
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:28 PM0comments Links to this post
Wednesday, 22 June 2011 16:24 KNG
ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပူတာအိုခရိုင်၊ မလိခမြစ်နှင့် ခရန်ခမြစ် ကြား (Mali-Hkrang Walawng)ဒေသတွင် ဇွန် ၂၂၊ ယနေ့ ဗုဒ္ဓဟူး ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီခွဲမှ စတင်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KIA ကြား တိုက်ပွဲစတင် လာသည်။
KIA တပ်မဟာ ၁ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၇ နှင့် ပူတာအိုမှ မြန်မာစစ်တပ်ကြား ခရန်ခ မြစ်ညာတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တပ်မဟာ ၁ သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုသည်။
ယခုချိန်ထိ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်ဟု လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှ KIA အရာရှိတစ်ဦးကလည်း ကချင်သတင်းဌာန သို့ အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
ဇွန် ၉ ရက် မြန်မာ-KIA တိုက်ပွဲများစတင်လာကာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KIA ကြား တိုက်ပွဲများ နေရာအနှံ့ဖြစ်လာသည်။
Last Updated ( Wednesday, 22 June 2011 16:34 )
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:26 PM0comments Links to this post
ကချင်မြို့တော် မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ် ဗုံးများ ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲ
Wednesday, 22 June 2011 10:00 KNG
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော်မြစ်ကြီးနား မှအမှတ် (၁) ရဲစခန်းနှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေး ရုံး တွင် ယမန်နေ့ ဇွန် ၂၁ ရက် ည ၁၁ ကျော်ချိန် ဗုံးများ ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
မြို့ခံတစ်ဦးက “ငါတို့ဆိုင်နားမှာပဲ ၃ အိမ်ပဲခြားတယ် ငါတို့အိမ်က ပုလင်းတွေတောင်ကျကွဲတယ်” ဟု ပြောသည်။
“လ၀က ကတော့ဟုတ်တယ် သွားကြည့်ပြီ အမိုးတွေပွင့်ပြီ မှန်တွေကွဲကုန်ပြီး တံခါးတွေလည်းပျက်သွားတယ်” ဟု လ၀က (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး)ရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူ နယ်ခံတစ်ဦးပြောသည်။
သို့သော် ယင်းပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သေဆုံးမှု မ ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) က ၎င်းတို့် ဖေါက်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကချင်သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
KIA မှ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု မြန်မာအစိုးရအား ဇွန် ၁၃ ရက် က ရာဇသံပေးပြီးနောက် ၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အစိုးရနှင့်ပတ်သက်သောနေရာဌာနများကို ဖျက်ဆီးရန် ခွင့်ပြုထားသည်ဟု ဆိုသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:05 AM0comments Links to this post
Wednesday, 22 June 2011 12:46 KNG
မြစ်ကြီနား-မန္တလေးရထားလမ်း မြစ်ကြီးနားမြို့အထွက် Nam Koi (နန်းကွေ့)ချောင်းဖြတ် ပေ ၁၀၀ ကျော် သံဘောင် ရထားလမ်းတံတားအား KIAမှ ဇွန် ၂၂၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညသန်းခေါင်ကျော်ချိန် ဗုံးပေါက်ကွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
ဒေသခံများပြောပြချက်အရ ချောင်းတံတား ကျိုးပြတ်သွားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် အဓိက ရထားနှင့် သင်္ဘောလမ်းကို အသုံးပြုပြီး ၎င်း၏ စစ်
အင်အားနှင့် လက်နက်များကို ကချင်ပြည်နယ်သို့ သယ်ပို့ပါသည်။
Last Updated ( Wednesday, 22 June 2011 13:00 )
Wednesday, 22 June 2011 14:33 KNG
Another main transportation link for the military-backed Burmese government is by ships along the Irrawaddy Rive and the Mali Hka River in Kachin State.
The civil war in Kachin State and Northern Shan State has been on for 14 days. It started after government troops startedamilitary offensive against the KIA at Sang Gang in N’mawk (Nomauk) Township in Manmaw (Bhamo) Township, on June 9.
The war broke out after the Burman-led central government ignored requests forapolitical dialogue with the Kachin Independence Organization (KIO), the political wing of the KIA and pressurized to disarm the KIA. The Burmans are inamajority in multi-ethnic Burma.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:00 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:22 AM0comments Links to this post
စစ်အစိုးရ၏ အပစ်ရပ်ရေးကမ်းလှမ်းချက်ဆိုသည်မှာ ကေအိုင်အေ အဖွဲ.စည်းတွင်း ဖဲ့ထုတ်သွေးခွဲလိုခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို.က ယူဆပါသည်။
kio news 1 -
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:47 PM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:20 PM0comments Links to this post
Friday, 17 June 2011 21:48 KNG
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်း၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲတွင် ယနေ့သောကြာနေ့တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်သား ၁၇ ဦးကျဆုံးသွားသည်ဟု ဆင်ဘိုဒေသခံများပြောသည်။
မြန်မာစစ်သား ၅ ဦးမှာ နံနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးပြီး ကျန် ၁၂ ဦးမှာ နေ့လည်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးသွားသည်ဟု လိုင်ဇာ KIO ဌာနချုပ်မှ အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
ဆင်ဘိုအခြေစိုက် ခလရ ၁၄၁ နှင့် ဆင်ဘိုဒေသမှ KIA တပ်ရင်း ၅ တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု KIA အရာရှိများပြောသည်။
၎င်းမြန်မာတပ်သည် KIA တပ်ရင်း ၅ အနီးသို့တပ်ချလာသည့်တပ်ရင်းဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်မေလ ၂၅ ရက် KIA တပ်ရင်းအနီးမှ တမိုင် နောက်ဆုတ်ပေးသည့်တပ်ဖြစ်သည်။
ဇွန် ၈ ရက်၊ မန်မော် (ဗန်းမော်)ခရိုင် အင်မောက် (မိုးမောက်)မြို့နယ် တာပိန်မြစ်အနီး ဆန်ဂန်ဒေသတွင် KIA တပ်ရင်း ၁၅ နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ရာမှ တဟုန်ထိုး ပြည်တွင်းစစ်သို့ပြောင်းလဲလာသည်။
စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၁၀၀၀၀ ကျော် တရုတ်နယ်စပ်သို့ရောက်ရှိလာသည်။ အထူးသဖြင့် နယ်စပ်မြို့များဖြစ်သော လိုင်ဇာ၊ မိုင်ဂျာယန်၊ လွယ်ဂျေ၊ အူရာဘွမ်၊ မန်ဝိန်းကြီးဒေသများသို့ဖြစ်သည်ဟု KIO အရပ်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန က ပြောသည်။
ဒုက္ခသည်အများစု မြန်မာအစိုးရအုပ်ချုပ်ရာဒေသများမှဖြစ်ကာ မြန်မာစစ်တပ်ကို ပေါ်တာဆွဲမည်ကို ကြောက်ရွံ့သဖြင့် နယ်စပ်သို့ထွက်ပြေးလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု လိုင်ဇာဒုက္ခသည်များပြောသည်။
KIO လိုင်ဇာဌာနချုပ်တွင် ဒုက္ခသည်စခန်း ၆ ခုထားရှိပြီး အစားအစာအသုံးအဆောင်များကို KIO ကထောက်ပံပေးနေသည်။
ယခု သောကြာနေ့အထိ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တ၀န်း မြန်မာ-KIA ကြား ၉ ရက်မြောက်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည်။
ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၁
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 12:38 PM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:47 PM0comments Links to this post
ကချင်အဖွဲ.မှ တရုပ်သို.အကူညီတောင်း( ဘန်ကောက်ပို.မှကူးယူပါသည်)
Burma rebels seek China's help
Published: 16/06/2011 at 11:31 PM
Burma ethnic minority rebels on Thursday appealed for China to help endadeadly standoff with government troops as Beijing called for calm after people fled across the countries' shared border.
Map locating Kachin, in Myanmar, where fighting has broken out aroundalarge hydropower project. Myanmar ethnic minority rebels have appealed for China to help endadeadly standoff with government troops as Beijing called for calm after people fled across the countries' shared border.
Fierce fighting beganaweek ago nearalarge hydropower project being built in Burma's northern Kachin State to provide power to China, and has since spread to northern areas of neighbouring Shan State.
China -- one of the Burma military's closest allies -- on Thursday urged both sides to "resolve their differences through peaceful negotiations".
"We are closely following the situation on the border between China and Burma and call on the parties in conflict to remain calm and exercise restraint so as to avoid an escalation of the situation," foreign ministry spokesman Hong Lei said.
The remarks came after the Kachin Independence Army (KIA) said it wanted China to bea"referee" in any potential negotiations.
"Without the involvement of another country asawitness, asafacilitator... there is no solution," KIA press spokesman Henry Branglai told AFP from the group's headquarters near the Chinese border in Kachin State.
Battles with the national military continued to rage on Thursday,aweek after hostilities began with what Branglai said wasagovernment incursion into KIA-held territory "to get some influence over that area".
More than 10,000 people have massed on the Burma side of the frontier, with many people seeking out KIA-held areas as they look to avoid being forced into carrying supplies for the Burma military, according to the rebels.
Branglai said thousands had crossed the border during the fighting and were being allowed to move back and forth between the countries.
Hong denied reports that Beijing was not allowing Burma refugees to cross the border and said China was providing support.
Butalocal official in the Yunnan province foreign affairs department, who refused to give his name, said there were no refugees at all.
"The borders are open as per usual. Burmaese nationals come and go every day. We are not considering providing tents or food as at the moment. There is no need," he said.
The authorities in Burma -- where power was handed toanominally civilian government in March after almost halfacentury of military rule -- have given no information about casualties or displaced people.
Butagovernment official confirmed the fighting on Wednesday and said some bridges had been destroyed.
Burma has been plagued by decades of civil war with armed ethnic minority rebels in various parts of the country since independence in 1948.
The mainly Baptist and Catholic Kachin account for about seven percent of Burma's population and an insurgency agitating for greater autonomy gathered momentum from the 1960s untilaceasefire was signed in 1994.
The KIA, thought to have at least several thousand fighters, used to be one of the most powerful rebel groups but was until recently considered to be open to dialogue.
Several local Kachin parties were refused permission to contest the vote, dashing long-held hopes for greater self-rule.
Burma's military rulers earnedarare rebuke from China in 2009 when an offensive against ethnic Chinese Kokang rebels in the country's northeast caused tens of thousands of people to spill over the border.
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တချို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ခိုလှုံ
Thursday, 16 June 2011 21:13 KNG
ဝိုင်းမော်-လိုင်ဇာ လမ်းမ ကဇူးယန် ကျေးရွာတွင် KIAနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့၏ စစ်ပွဲငယ်ကြောင့် တရုတ်ပြည်နယ်စပ် မသွားနိုင်သော ဒုက္ခသည်များသည် ဝိုင်းမော်မြို့တွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများသို့ လာရောက် ခိုလှုံနေသည်။
ကဇူးယန် ကျေးရွာတွင် ယမန်နေ့ နံနက် ၃နာရီမှ ၅နာရီထိ စစ်ပွဲငယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အနီးအနားရှိ ဂါးရာယန်၊ ဂန်ဒေါင်ယန် စသည့်ကျေးရွာများမှ ဒုက္ခသည် (၃၀၀)ကျော်သည် ဝိုင်းမော်မြို့သို့ ထွက်ပြေးလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေပေ့ါ၊ ဝိုင်းမော် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လာခိုနားနေတာ။ လူကမနည်းဘူး ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာ လာနားတာ” ဟု ဝိုင်းမော်မြို့မှ မြို့ခံတစ်ဦးပြောသည်။
တရုတ်နယ်စပ် KIO လိုင်ဇာသို့ ခိုလှုံလာကြသော် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ။
KIAနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့၏ (၇) ရက်ကြာ စစ်ပွဲများကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များသည် တရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက် သွားရောက် တိမ်းရှောင်လာသူများလည်း အယောက် (၁၀၀၀၀)ကျော်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း KIOမှ သိရသည်။
ယမန်နေ့ညအထိ KIA ကောက်ခံထားရှိသည့် ဒုက္ခသည် စာရင်းအရ လိုင်ဇာတွင် (၂၂၉၁)၊ တပ်မဟာ (၃) အူရာဘွမ် ဖျင်ရှန် ကျေးရွာတွင် (၃၀၀)ကျော်၊ လွယ်ဂျေတွင် (၄၂၃၈)၊ မန်ဝင်းကျေးရွာတွင်မူ (၂၀၀၀)ကျော်နှင့် မိုင်ဂျာယန်တွင် (၃၀၀)ကျော် ရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း KIOအရပ်ဖက် အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိ ဆလန်ကဘ ဒွဲပီဆာ ပြောသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့များတွင် အစိုးရတပ်မှ လုံခြုံရေးတပ်များ တင်းကြပ်စွာ ချထားကြောင်း သိရသည်။
“အခုဆို ယာဉ်ထိန်းရဲတွေလည်း သေနတ်နဲ့ပဲ၊ သေနတ်ကိုယ်စီ ကိုင်ထားကြတယ်၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဂိတ်တွေမှာဆို ရဲ၊ စစ်သားတွေ စုပြီး လုံခြုံရေး ယူနေကြတယ်။” ဟု မြစ်ကြီးနား မြို့ခံ ဆိုသည်။
အစိုးရတပ်များ၏ စစ်ဝတ်စုံနှင့် အတူ လက်နက်များကိုင်ဆောင်ကာ ရပ်ကွက်တိုင်း ကင်းလှည့်လည်မှုများကြောင့် ဒေသခံများ ည (၆)နာရီ ကျော်လျင် ညမထွက်ရဲပဲ တစ်မြို့လုံး တိတ်ဆိတ်နေသည်။
ယခုလို KIAနှင့် မြန်မာစစ်တပ်ကြား စစ်ပွဲမစမည် ၃ ရက်အလိုတွင် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိ တစ်ရပ်ကွက်လျင် လူငယ် (၁၀)ဦးစီ ပြည်သူ့စစ် သင်တန်း တက်ရန် ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်း၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ခေါ်ယူခဲ့ကြောင်း ဝိုင်းမော် ရပ်ကွက် လူကြီးမှ ပြောသည်။
“ကျတော်တို့က လူစုပေးတာပေ့ါ။ လူမရတဲ့အဆုံးက ငှားရတာပေ့ါ။ ဥက္ကဋ္ဌတွေ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေ က ငှားပေးရတာ။ မြန်မာနှစ်ယောက်၊ ကုလားနှစ်ယောက်၊ ရှမ်းပိုင်းနှစ်ယောက် အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ ထုတ်ပြီး ပေးလိုက်တယ်။ ဘယ်ရွာမှ မလွတ်ဘူးလေ။ လူငယ်ပိုင်းတွေ ကောက်တာ။”
မြန်မာစစ်တပ်မှ လူငယ်များကို ပြည်သူ့စစ်သင်တန်းပေးမည်ဟု ခေါ်ယူသွားပြီး ယခုထိ ယင်းလူငယ်များ အကြောင်း တစုံတရာ မကြားကြောင်း ရပ်ကွက်လူကြီးမှ ဆက်ဆိုသည်။
“စစ်တိုက်ဖို့လား သင်တန်းပေးဖို့လားတော့ မသိဘူး။ ဘယ်မှာ သင်တန်းပေးမှန်းလည်း မသိပါဘူး။ တစ်ချို့ကြတော့ ဝါသနာပါကြတယ်။ ကပ်ဖားယပ်ဖားတွေလည်း ရှိတယ် ဆိုတော့ သွားကြတာပေ့ါ။ ပြန်တော့မလာကြသေးဘူး။”
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:49 AM0comments Links to this post
ကချင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက် တံတား ၆စင်း KIA ဖျက်ဆီး
Thursday, 16 June 2011 13:05 KNG
ဇွန် ၁၅ ရက် ညတွင် ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက် KIA တပ်မဟာ ၂ နယ်မြေတွင်လီဒိုလမ်းပိုင်း တနေရာမှ ယုဇန ကုမ္ပဏီကဆောက်လုပ်ထားသည့် တံတား ၂ စင်းအား KIA တပ်ရင်း ၁၄ က ဖောက်ခွဲလိုက်သည်။
ထို့အပြင် ဖားကန့်-ကားမိုင်းလမ်းပိုင်းမှ တံတား ၂ စင်းကိုလည်း KIA တပ်ရင်း ၆ မှ ဖောက်ခွဲလိုက်သည်။
KIA ဖျက်ဆီးသော တံတားရှိရာ နေရာပြ မြေပုံ။
ဆက်လက်ပြီး ဖားကန့်-ဂွီခါလမ်း ဟိုပင်-နမွမ်ကြားမှ တံတား ၂ စင်းအား KIA တပ်ရင်း ၂၆ က ဖုံးခွဲဖျက်ဆီးလိုက်သည်။
KIA တပ်မဟာ ၂ မှ အရာရှိများ ကချင်သတင်းဌာသို့ အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
st Updated ( Thursday, 16 June 2011 21:13 )
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:47 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:51 AM0comments Links to this post
kio news -
တရုတ်နယ်စပ်သို့ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၁၀၀၀၀ ကျော် ရောက်၊ ဆက်ရောက်လာနေဆဲ
Thursday, 16 June 2011 12:37 KNG
Last Updated ( Thursday, 16 June 2011 13:03 )
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:34 AM0comments Links to this post
၀ိုင်းမော်-ကန်ပိုင်တီ လီဒိုလမ်းမကြား တံတားတခု KIA ဖျက်ဆီး
Wednesday, 15 June 2011 16:50 KNG
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့ဘက် ဝိုင်းမော်-ကန်ပိုင်တီ လီဒိုလမ်းကြား လန်နုချောင်း (Lant Nu stream) တံတားအား ယမန်နေ့ည (၉)နာရီတွင် KIAမှ ဗုံးဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
ယင်း ဗုံးဖေါက်ကွဲမှုကြောင့် ၁ပေခန့်စီရှိ အပေါက် နှစ်ခု ပေါက်သွားခဲ့ကာ တံတားအောက်၌ မပေါက်သေးသည့် ဗုံးနှစ်လုံးမှာ ရှိနေသေးသည်ဟု မျက်မြင် ဆဒုံ ဒေသခံ ပြောသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသည့် ဗုံးကြောင့် မြန်မာအစိုးရမှ မော်တော်ယာဉ်ကြီးများ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်အား ပိတ်ပင်ထားသည်။
“အပေါက်နှစ်ပေါက်တော့ ပေါက်နေတယ်။ အခုဆို ဒေသခံတွေ အားလုံး အကုန် သတိနဲ့ နေနေရတယ်။ သေနတ်သံတွေ တော့ မကြားရသေးဘူး။”
ဇွန် ၁၄၊ အင်္ဂါနေ့ည KIAမှ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သော ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းမြောက်ရှိ တံတားတချို့။
ယင်း ပေ (၁၀၀)ကျော် ကွန်ကရစ်တံတားတွင် မော်တော်ယာဉ်ကြီးအား ပိတ်ပင်ထားသော်လည်း ဆိုင်ကယ်နှင့် သုံးဘီး ဆိုင်ကယ်များကိုမူ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရသည်။
ဇွန်လ (၁၄) ရက် တစ်ရက်တည်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲခြင်းကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တံတား (၄) စင်း ပျက်စီးခံရသည်။ အဆိုပါ တံတားများမှာ ၀ိုင်းမော်မြို့ရှိ တန် ၆၀ ခံ နန့်မြစ် (N-Myen Hka)ချောင်းကူးတံတား၊ KIO ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် မလီ(Mali Hka)ချောင်းကူးတံတား၊ လန်နုတံတား တို့ဖြစ်ကာ တစ်စင်းကိုမူ အတိအကျ မသိရသေးပေ။
ထို့ပြင် ရှမ်းပြည်နယ် KIA တပ်မဟာ (၄) အနီးရှိ မန္တလေး-မူဆယ် ကားလမ်းမှ နမ်ဖတ်ကာတံတားနှင့် တာမိုးညဲ-မုန်းစီကားလမ်းရှိ နမ်ဆာခမြစ်တံတား၊ (၂)စင်းလည်း ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
တာခေါခ(တာပိန်မြစ်) ရေကာတာ ၂ ခုရှိရာသို့ အဓိက ဆက်သွယ်ပေးနေသည့် နမ်ဖတ်ခ ချောင်း တံတားလည်း ဇွန်လ (၁၃)ရက်နေ့တွင် KIAမှ ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးလိုက်သည်။
ဖေါက်ခွဲမှု ခံရသည့် ဝိုင်းမော်မြို့ရှိ နန့်မြစ် ချောင်းကူးတံတားကိုမူ မြန်မာစစ်တပ်မှ လျင်မြန်စွာ ပြင်ဆင်လိုက်ပြီး စစ် မော်တော်ယာဉ်တန်းများ ပြန်လည် ဖြတ်ကျော်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဝိုင်းမော် ဒေသခံများ ဆိုသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:46 AM0comments Links to this post
ရန်-ငါ-စည်း မှ သံသယ ၀င်္ကဘာ (ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း)apr23,2011
၂၀၀၄ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် မပြုတ်ခင်က ထင်တယ်။ NCGUB ကဦးစီးပြီး NCUB က ဖဒိုမန်းရှာတို့ လည်းရောက်နေတုန်း ဆိုတော့ …Ft. Wayne မှာ ဗမာတွေ့ဆုံကြတဲ့ပွဲမှာ ..လူအတော် စုံကြတယ်။ ၀ုံးဆို အသံ ကျယ်ကျယ်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်က မာန်ပါပါနဲ့ စင်ပေါ်က ပြောနေသံ ကြားလို့ဂရုစိုက်နားထောင် လိုက်မိတယ်။ လူကို မမြင်ဖူးပေမယ့် ထောင်ထဲမှာ သူ့ကို ရင်းနှီးခဲ့ရတယ် ။ သူစပ်တဲ့ သီချင်း တပုဒ်က စိတ်ဓါတ်ကို အတော်တက်ကြွစေခဲ့တယ်။ ပီဒီပီ စစ်ချီသတင်းတပုဒ်ပါ။ ခုမှ..အပြင်မှာ မြင်တွေ့ဖူးရ တော့တယ်။ သူပြောတာကို .. အလေးပြု နားထောင်မိတယ် ….။ ပြောရင်း ဆုံးကာနီးမှ … .. သူက ထောက်လှမ်းရေး.. စပိုင် တွေကို သတိရှိကြဖို့ ..ပြောရင်းက ..ဒီအထဲ မှာလည်း ..စပိုင် … ရှိတာပဲ..တဲ့ ။ထမင်းစားချိန်မှာ .. .. သူ့ ကို သွားရောက် မိတ်ဆက် ..စကား ပြောမိရင်း ..ခင်ဗျား ခုန.. ပြောတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ..လူတွေဆိုတာ..ပြောပါဦး..ဆိုတော့ ..မသိဘူး လေဗျာ..တဲ့ ...။ရမ်းဆော်လိုက် တာ.. ရှိရမှာပေါ့တဲ့ … ။ကျနော်လည်း.. ပေါ့ပေါ့ပဲ ..သဘောထား လိုက်မိတယ် ….။
အခုမှ ..အသေအချာ..သုံးသပ်ကြည့်တော့မှ … မြတ်စွာဘုရား..ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ … ရန်-ငါ-စည်း ..စိတ်ဓါတ်ကို … ထောက်လှမ်း ရေးက …. ကောင်းကောင်း..မီးမွှေး..အသုံးချလိုက်တာ … ဒီ..သံသယ .. စက်ကွင်းဟာ … အတိုက် အခံထဲကို … စိမ့်ဝင်လာတာ … ပီဒီပီ တွေအထဲမှာထောင် ပြန့် လို့ နေ ပါလား?
စစ်ကြောရေး..အ၀င်ခံရဖူးသူတိုင်း..သိကြမှာပါ ….။ ဖုံးမနေပါနဲ့ကွာ..။ဘယ်သူက ဘာတွေပြောပြီးပြီ..ဆိုပြီး …. ထောက် လှမ်းရေး တွေက ....စိတ်ဓါတ်ကျအောင် စိတ်ရှုပ်ထွေးအောင် … သုံးတဲ့နည်းလေ … ။ တခါ … တခါ.. ထောက်လှမ်းရေးတွေ .. ရမ်းမွှေ လိုက်ရင် …ဒါမှမဟုတ် ...လံကြုတ်ဇာတ်လေး ..ထည့်ပေးလိုက်ရင် ..အချင်းချင်း ယုံထင်ကြောင်ထင်နဲ့ …. ညီညွတ်ရေးပျက် … ဇာတ်တွေ..ရှုပ်ကုန်ရော….။ အတိုက်အခံ ပြိုင်ဖက်တွေအကြား..မကျေနပ်မှု. ကို အရင်းပြုပြီး ..အမြတ်ထုတ်တာ ..ထောက်လှမ်းရေး ..တွေလုပ်နေကြပဲ…. ။
ရန်-ငါ-စည်း..ဆိုတဲ့..မီးစ ကလေးက.. ရှိလေတော့ ..ထောက်လှမ်းရေးတွေ အတွက် .. ၀ူး..ဆို..လေမှုတ်ပေးလိုက်ရုံပဲ …။ ကြာလာတော့ ..တယောက်ကို တယောက်..မယုံတဲ့.. သံသယမျက်စိနဲ့..အရင်ကြည့်တတ်တဲ့အကျင့်ဆိုးဟာ ..အတိုက်အခံ တွေကြားမှာ စွဲကပ် ..လာကြတယ် …။ မညီညွတ်ကြတာလဲ..မပြောနဲ့လေ ….။
ထောက်လှမ်းရေးတွေ တော်တာလား ..အတိုက်ခံတွေ ..ညံ့တာလားတော့ ..မပြောတတ်တော့ နောက်...ကျနော်တို့ ဗမာတွေရဲ့ အကျင့်ဆိုးက..(စည်း) မစောင့်ကြဘူး … ။ ရွာထဲမှာ … မိန်မအချင်းချင်း မတည့်လို့ … မိသားစုချင်း မတည့်ကြရင်လည်း … အခွင့်ရတာနဲ့ ..ချောက်(ဂျောက်)တွန်းလို့ရရင် ဂျောက်တွန်း လိုက်ကြမှာပဲ …။ ဂျပန်ခေတ် က ..ဒီလိုနဲ့ ..လူတချို့..ဘ၀ပျက် ..အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ် … ။အခု ..လည်း အခွင့်ရတာနဲ့ … စစ်တပ်လူ ..ဆိုပြီး..အတို့အထောင်လုပ်ဖို့ ..၀န်မလေးကြဘူး … ။၀မ်းနည်း စရာက … conscious လို့ခေါ်တဲ့ ..စိတ်သန့်တာ -မသန့် တာ .. တရားတာ-မတရားတာ … မှန်တာ-မမှန်တာတွေ နားမလည်ကြဘူး။ အထူး သဖြင့် ..ကွန်မြူနစ်တွေ အဖို့ ..အမှန်တရား ..ဆိုတာက … ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ ပါးစပ်က ပြောတာနဲ့ မော် ပြောတာတို့ပဲကိုး …..။
အခုလောက်ဆို … ရဲရဲနီ..ရဲဘော်ကြီး (၂) ဦး … အင်း..ဟင်း..ဆိုပြီး … လေချင်တက်လို့ ကောင်းနေ ကြရောပေါ့ …. ။ လူချ လိုက်ရလို့ အာသာပြေ အရသာ..ရှိ နေကြရောပေါ့…. ။ ရဲရဲနီတွေနဲ့..မနီ့တနီ တွေရဲ့ ချီးကျူးစာတွေ ..ဖတ် ပြီး… ငါးခူပြုံးလေးနဲ့ ..ကျေနပ်နေကြရောပေါ့ ..။ဒါပေမယ့်..ဒီအလွှာက တဆင့် … ခပ်နက်နက်လေး..တွေးကြည့်ရင် … မိမိတို့ကို ဖျက်မယ့်…မျိုစေ့ကို တိုးပွား နေခြင်း ဆိုတာကို ..သဘောပေါက်ကြမယ်..လို့ ..မထင်မိဘူး …..။
ယ္ခင့် ယ္ခင် တုန်းကလည်း …. ဗကပ ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ ပီကင်းပြန်တွေဟာ… အဖေတရုတ်ကြီးတွေရဲ့ …. ဥပမာ ကိုယူပြီး …. ဖြူတ်-ထုတ်-သတ် လုပ်စဉ်တုန်းကလည်း …. ရာဇ၀င်..ရှိခဲ့တဲ့ … ရဲဘော် ဘတင် (ခ) ဂိုရှယ်..နဲ့ ရဲဘော်ဌေး တို့ကို …. နို့နံ့ မစင်တဲ့ …. တပ်နီလေးတွေက … လူကြီးတွေရဲ့လည်ချောင်း သွေးနဲ့ ..ခြေထောက်ဆေးခဲ့ ကြတာကို ကြည့်ပြီး …. ရဲရဲနီတွေ ကျေနပ်.. ပီတိ..ဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲ … ။နောင်မှ … ဒီစိတ်ဓါတ်နဲ့ ဒီအကျင့်ကို ..မဖျောက်နိုင်ကြဘဲ …. စစ်တပ် က …. လိုက်တိုက်နေတဲ့.. ကြားကအချင်းချင်းသတ်လို့ …. ဟင်္သာကိုးသောင်း ပျက်တဲ့ ..ကိန်းဆိုက်ခဲ့ရတယ်..မဟုတ်လား?
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ခေါ်တော့ ..နိုင်ငံရေး ကျားကစားတာကို ..နားမလည်တဲ့ ..စစ်ဗိုလ်တချို့ က ..ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်းကို မေး တော့ ..ငါ..ဘယ်သူ ဘာလဲဆို သိချင်လို့ ...ဖြေတယ် …။ တကယ်က .. ဗကပထဲမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကို … ငြီးငွေ့လာတဲ့ … လူတွေနဲ့ …တင်းမာသူတွေအကြား…ကွဲပြားမှု ရှိတာ …sit report မှာ ပေါ်မှာပေါ့ ….။ စာရေးသူ တွေးလို့ရတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်းက … ကျားတကောင် ထိုးကျွေး..သုံးကောင်စားပြီး ..ကင်းယူတာပဲ ….။ ပထမ က …. ပျော့ပျောင်းတဲ့သူ တွေကို မျှော် လင့်ချက်.. ပေးလိုက်တာ ..။အားပေးလိုက်တာ … ။ ဒါမှ အက်ကြောင်း ပိုနက်သွားမှာ ..။ ပြီး .. ပီကင်းပြန်တွေအကြောင်း … ပိုသိရမှာ … ။ နောက် ပြည်တွင်း ယူဂျီတွေအကြောင်း …ပိုသိခွင့် ရမှာ …. ။ခါကျင်အိမ်ကို ထုတ်နဲ့စွပြီး ..အပေါ်ကစီးကြည့်တာပဲ …. Risk တော့ရှိတယ် …။
ထင်တဲ့ အတိုင်း … ရန်-ငါ-စည်း … စိတ်ဓါတ်ကို ..ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီး … ရန်-ငါ-စည်း မျက်စိနဲ့..ကြည့် တော့ … မိမိ နဲ့မတူ သူတိုင်း… ရန်သူ လာဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ …။ တကယ်တော့ ဂိုရှယ်ဟာ ..သေတာတောင် ..အင်တယ်နေ ရှင်းနယ်သီချင်းဆိုရင်း ..သေသွား ရှာတဲ့ ..ကွန်မြူနစ်ပဲ …။ ကွဲတာက ဥက္ကဋ္ဌ သ္ခင်သန်းထွန်းနဲ့ အမြင်ချင်းကွဲကြတာပါ …။ဒါကြောင့် ..ဒေါ်စုက မိမိနဲ့မတူသူတိုင်း ရန်သူ အနေနဲ့ ..မမြင်ဖို့ပြောရတာပါ …. ။ ရန်-ငါ-စည်း … စိတ်ဓါတ်ကို အသေစွဲ.. ကိုင်ထားရင် …အချင်းချင်း အမြင်မတူတာနဲ့ ရန်သူလို့ ..လွယ်လွယ်သတ်မှတ်လိုက်ကြတော့… အတွင်း လှိုက်စား …. ညီညွတ်မှုပျက်ပြား .. နိုင်ငံရေးဘ၀..ပျက်တတ်ပါတယ်။
ဖဆပလ က အင်္ဂလိပ်နဲ့ စကားပြောတော့ … ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ..လုပ်ကွက်ကို ကြည့်ရအောင်။
ဗိုလ်ချုပ်ဦးဆောင်ပြီး.. ရ အောင် ဆွေးနွေးသူတွေ..ရှိသလို … (မရ) ရင် (ချ) ဖို့ … ပြင်ဆင်တဲ့ သူတွေက ပြင်ဆင်ကြရတယ် ….။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် .. ဗိုလ်ချုပ် က … ရန်-ငါ-စည်း စိတ်ဓါတ်ကို ရှေ့တန်းတင်မလာတော့ ..အချင်းချင်း … စိတ်ဝမ်းကွဲစရာ မရှိ … ။အားလုံး..ရည်မှန်းချက်..အတူတူ .. ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြရတာပဲ ….။ ညီညွတ်တော့ အားရှိတယ် … ။ အားရှိတော့ ရန်သူက.. လေးစားရတာပေါ့ … ။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်က ရဖို့ ဥိး ဆောင်နေတာကိုး … ။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို ချတာ .. ဆဲတာ ကွန်မြူနစ်တွေပဲရှိတယ် ….။
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ သခင်သန်းထွန်းတို့ ခေါင်းဆောင်မှုချင်း ကွာတယ်နော် … စိတ်ဓါတ်ချင်း..ကွာတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် က မနာလိုစိတ် မရှိ … ။ နိုင်ငံရေး ..ဖျံပေမယ့် .sincere ဖြစ်တယ် ။ honest ဖြစ်တယ် …. ။(သိပ်လေးစား ..သိပ် ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် …။ လူငယ်လေးတွေ အတုယူဖို့ ..သတိပြုစေချင်တယ်။)
အောင်ဆန်းအက်တလီ..ဆွေးနွေးပွဲ..သွားတော့ … ဦးတင်ထွဋ် တို့ ..ဂဠုန် ဦးစော တို့ကို ဘုရင်ခံက ထည့်တာ …. ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်မြ တို့က ဖဆပလ ကိုယ်စားလှယ်တွေ .. ။ ဦးကျော်ငြိမ်းက ဖဆပလ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး..။ (၀န်ကြီး မဟုတ်တာကြောင့် ..ဗိုလ်ချုပ် က ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံ ဆိုပြီး ခေါ်လာရတယ် …။) ဦးတင်ထွဋ် က ဘုရင်ခံ အင်မတန် အားကိုးရတဲ့ အိုင်စီအက်စ်။
သခင် သန်းထွန်းရဲ့ .. ရန်-ငါ-စည်း … စိတ်ဓါတ်..နဲ့ကြည့်ရင် ..ရန်သူ့လက်ပါးစေ ..ရန်သူပေါ့ ။ ဗိုလ်ချုပ်က သည်လို မမြင်ဘူး ။ ဗမာပညာတတ် ဗမာလူတော်..လို့မြင်တယ် …။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့ ..လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေ …. ဘတ်ချက်တို့...စီးပွားရေး အသေးစိပ်တို့ကို .. ဦးတင်ထွဋ် အကူ အညီ နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရော .. သခင်မြရော .. ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ ပိုသိမြင်ခဲ့ရတာ …။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်က ဆွဲခေါ်လာပြီး … လွတ်လပ်ရေးရတော့ ..နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက .. ဦးတင်ထွဋ် …။ ဒီဖက်ခေတ် အခြေအနေနဲ့ကြည့်ရင် … ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေနဲ့ ..ဆွေးနွေးပွဲမှာ … ဒေါ်စုက … ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကို ဆွဲစားပြီး .. ဘယ်ဘက်မှာထိုင် ခိုင်းပြီး.. ဦးဏှောက် ဖေါက်စားသလိုပေါ့..။ (မှတ်ချက်။ တကယ်များဖြစ်ခဲ့ရင် ရန်-ငါ-စည်း သမားတွေ ဖင်ဆောင့်ဆောင့်ပြီး ..ဆဲ..လိုက်ကြမည့်ဖြစ်ခြင်း ..။ ဥါဏ်မှ မမှီကြတာကိုး။)
ကွန်မြူနစ်တွေအဖို့ … တရားတာ..မတရားတာ … ဟုတ်တာ..မဟုတ်တာတို့ …. ဖြစ်နိုင်..မဖြစ်နိုင်တို့ .. ကိုထည့်သွင်း ..စဉ်းစား တတ်တာ မဟုတ်ဘူး …။ ရန်-ငါ-စည်း ..အမြင်အရ … ရန်သူလို့သတ်မှတ်သူ ..ဒါမှမဟုတ် … အမြင်မတူသူတွေဆို … ရန်သူပဲ… ။ ဒါကြောင့် အခွင့်ရတာနဲ့ … နာမည်တပ် စွပ်စွဲ ..လာကြတယ် ….။ ထောက်လှမ်းရေးဆို တာက ..သူ့အလုပ်သူလုပ်ကြတာပဲ …။ ရရင်ဆွဲစားမယ် … ။အခွင့်ကြုံရင် … ကွဲအောင် ၀င် (ဖွ) လိုက်မယ် … ပေါ့ …။
ဗိုလ်ချုပ်မြ..လို လူမျိုးကိုတောင် ..၀င်လုံး..သေးတာပဲ…။ ဗိုလ်ချုပ်မြကြီးလည်း .. သူ့အဖွဲ့ အစည်း..အကျိူး .. သူ့လူမျိုး ..အကျိုးအတွက် … ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နဲ့တွေ့တာပဲ … ။ ကွန်မြူနစ်တွေလည်း … ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်း..လူတွေနဲ့ ..တွေ့ကြ တာပဲ …။ ဒါနိုင်ငံရေးမှာ… ဖြစ်စဉ်တခု .. ။တာဝန်တခုပဲ … တွေ့တိုင်း …စကားပြောတိုင်း .. စစ်တပ်လူ..ဖြစ်ရရော လား? စစ်တပ်သူလျှို ဖြစ် ..ရရောလား? ရန်-ငါ-စည်း ကို အသေကိုင်စွဲထားသူတွေအဖို့အတွက်ကတော့ … သံသယ.. ဆိုတာက ..ဖုံးလွှမ်းထား တော့… လူတိုင်းဟာ ရန်သူပေါ့ …။ ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူသူတိုင်းဟာ ..ရန်သူ့လူကြီးပဲ ….။
မသိလို့..မေးလိုက်ချင်တယ် ..။ဗိုလ်ချုပ်မြ .. ရန်ကုန် သွားတုန်းက.. ဘာကြောင့်..ရဲရဲနီ… ရဲဘော်ကြီးတွေ …ရဲရဲ တောက်.. မရေးရဲတာလဲ? မဲဆောက်မှာ နေပြီး.. ပေါက်ကရ ..စွပ်စွဲရင် … ခေါင်းနဲ့ကိုယ်..အိုးစားကွဲသွားမှာပေါ့ …။ သေနတ်ရှိတဲ့သူကိုတော့ ကြောက်တတ်သား ….။
စာရေးသူလည်း.. ရှင်းပြပြီးပေမယ့်..ကွန်မြူနစ်..ဆိုတာကတော့ … အမြင်မတူရင် ရန်သူလို့ပဲမြင်ကြ တော့ ..လစ် တာနဲ့ ….နောက်ကျော ကို ဓါးနဲ့..ထိုးဖို့က..အဆင်သင့် ….။ စာရေးသူကို..စွပ်စွဲဖို့က .. စာရေးသူဟာ ..ရန်ကုန် သို့လည်း..မသွားခဲ့…။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ..ရရင်ရ..မရရင်ချ..ပေါ်လစီကို လက်ခံသူ..ဟု အတိအလင်းရေးခဲ့သူ …..။
နောက် စာရေးသူဟာ ..နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်တွေကို ….နိုင်ငံရေးအကွက်နဲ့ ..ကြည့်တတ်တယ် .. ။ဘာကြောင့်လဲ?
နိုင်ငံရေးအကွက်..အနောက်မှာ ..ဗျူဟာ ရှိတယ် ..။ ဒီ့နောက်မှာ .. အတွေးအခေါ်နဲ့Vision ရှိလို့ပါ..။
ရွေးကောက်ပွဲ ကာလကို ..တချက်ကြည့်ရအောင် ….။
ရွေးကောက်ပွဲ …မတိုင်ခင် ကာလ မှာ..ဖြစ်ရပ် နှစ်ခုဟာ ထင်ရှားခဲ့တယ် … ။ ဇင်ဘာဘွေ နဲ့…အီရန်။
ဇင်ဘာဘွေ မှာ မူဂါဗီ ဟာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်လာတဲ့ အတိုက်အခံ မော်ဂင်ချန်ဂရိုင်းကို နိုင်ဖို့ဗြောင် .. ညစ်ရ ..ရိုက် ရတယ် …. ။ထို့နည်း၎င်းပဲ …။အီရန်မှာ … လူမြင်မကောင်းအောင် ညစ်ရတယ် …။ နောက်တခုက …. ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်တာနဲ့ … စည်းရုံးခွင့်ရမယ် … ။ အီရန်မှာ ..ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ လူထုစည်းဝေးပွဲတွေကို တားဆီးလို့မရ …။ ဒီစည်းဝေးပွဲတွေက အရှိန်တက်လာကြတာ … ။
အင်န်အယ်လ်ဒီ (NLD ).. လူထုနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရမယ် ….။ ပွဲကြမ်းမယ်..။ risk များတယ် ။ ဒါပေမယ့် . ..အကွက်လှတယ် ။အင်န်အယ်လ်ဒီ NLD နိုင်ရင် (၉၀) ရလဒ် … (၂၀၁၀) ရလဒ် ကို ကိုင်ပြီး တောင်းဆို သောင်းကျန်း ပေတော့ ။ညစ်လို့..ရှုံးလည်း ..(၉၀) ရလဒ် ကို ကိုင်ပြီး အော်..လို့ရတယ် …။ ဒါကို ကျနော် မြင်ပြီး … NLD ၀င်ပါ ပါ..လို့ ကျနော်က ရေးခဲ့တာ ….။ တကယ့်ကို win-win-situation ကြီး ။ အီရန်ကို ကြည့်ပြီး ကျနော် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာ ..အမှန် ….။ ဒါက ဗျူဟာမျက်စိနဲ့ကြည့်တာ …..။
ကျနော်တောင်….မြင်မှတော့ … ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေလည်း..မြင်မှာပေါ့ ….။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေဟာ ..ကြည့်တော့ နုံတုံတုံ အတတ .. အူတူတူ .. မခုပ်တတ်တဲ့ ကြောင် …။ ခေါင်းထဲမှာ… ဥါဏ်ကြီး ပဲ … ။ အင်မတန်.. လျှင်တဲ့ ..ဗျူဟာမှူး..။ good strategist ..။
ဒီတော့ ..ပထမ..အကွက်က..ဘာကို ..စ..ရွှေ့သလဲ?
ဦးဝင်းတင်ကို အစောကြီး ကြို..လွှတ်ပေးလိုက်တယ် .. ။ စာရေးသူက..ပထမ.အစဉ်းစားကြပ်သွားတယ်? နိုင်ငံရေး မှာ .. အသားလွှတ် ..မရွှေ့ဘူး ….။ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ရပ်တည်ချက် က ..(မူ အပေါ် ရပ်တယ်) … (ဒူးမထောက်ကြေး) ..(မာတယ်) ..စသည် စသည်ဖြင့်ပေါ့ ….။ တဖက်ကလည်း … အန်ကယ်ကြီးတွေကို ..၀င်ပါလို့ ..မျက်စိမှိတ်ပြလိုက်တယ်..လို့ထင်တယ် … ။ တဖက်က ၀င်မယ်ဆို ရင် … တဖက်က ..မ၀င်ဖို့ … ပိုကြိုးစားလာရတော့မယ်လေ ….။ NLD ထဲမှာ.. အပင်းထည့်ပေးလိုက် တာ …။ ရန်တိုက်ပေးလိုက်တယ် …. ။
တဖက်ကလည်း … ၀င်ကြပါ .. ၀င်မှ credibility ရှိမယ် ..တရား ၀င်မယ် ..ဆိုပြီး..တောခြောက်..တောလှန့်..ပေးလိုက်တော့ ..မ၀င်ဖို့ဖက်က … ပိုခံပြင်း.. ပိုအတိုက်ခံ လုပ် … ။ပိုပြင်းထန်လာကြတယ် ….။ ပိုသေချာအောင် … ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ..ပုံစံကို ယူပြီး … ဥပဒေနဲ့ ..ညစ်ပြ ..လိုက်တယ် ..။ အမှန်က … မာန..ကို ကလိ..ကစားလိုက်တာပါ …။ ၀င်ချင်ရင်တောင်..မ၀င်နိုင်အောင် ..အောက်စည်း နဲ့..၀င် ဆိုတော့ … ဘယ်သူမှ… ရာဇ၀င်..တရားခံ..မဖြစ်ချင်ကြတော့ ..” မ၀င်ဘူးကွ …။ဒါပဲ..သန်းရွှေရ..”ဆိုပြီး ..ရင် ကော့ပြီး …. ထွက်ထိုင်ခဲ့ကြတယ် ….။
အတိုက်အခံတွေ ..အမြင်မှာ..ငါတို့မှန်တယ် .. မူအပေါ် ရပ်တယ် …. သတ္တိရှိတယ် ပေါ့ .. ။(မူ) နဲ့ (သိက္ခာ) အရ ..ငါတို့ (နိူင်) ..လိုက်ပြီ…။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ၀င်စေချင်တာ မ၀င်ဘူးကွ .. ။ရန်-ငါ-စည်း..သမားတွေ..အတွက်ကတော့ … နိဗ္ဗာန်ပေါ့ ….။ ဒါက..အဆင့် တခုက ကြည့်တာ။
ဗျူဟာမျက်စိ ကို သုံးတဲ့အဆင့် တခုက..ကြည့်ရင် …. ဘယ် ချောက်ခါ ညာလှမ်း..အတိုက်ခံတွေကို ..မျက်လှည့် ပြပြီး … အားလုံးကို ..သူလိုချင်တဲ့ ပုံ… ကျုံးသွင်းသွားတာဗျို့ …။
အားလုံးက..၀ိုင်းဆဲ နေကြတဲ့ …အရူးကြီး … ငပေါ ကြီးဆိုတဲ့.. ပေါတာကြီး..သန်းရွှေက … သုလိုချင်တဲ့ ပုံ..သူ ဖေါ်သွားတာပဲ… ။သူ့လူတွေ တောင် ..အကုန် မပြော ..။ တယောက်ကို..တမျိုးပြောပြီး … ။ သူ တယောက်ထဲ..ကစားသွားတာ ….။ ဂျင်အပေါ်က ထုံးအစစ် ….။
သာမာန်..လြူပိန်းတွေး..တွေးရင် …၁၉၉၀ တုန်းကလို … ပါတီများများဝင်မှ ..ပို..တရားဝင်မယ် …။ ပိုကြည့်ကောင်း မယ် ...စသည်ဖြင့်ပေါ့ ….။ ၁၉၉၀ က တကယ် တော့ ဒီမိုကရေစီ..ဆိုတာ … ရှုပ်ထွေးမှု chaos ဆိုတာကို ဖေါ်ထုတ် ချင်လို့ … မဲဆန္ဒရှင်တွေ ရှုပ်ထွေးအောင် ..လုပ်တာ …။ မဲဆန္ဒရှင်တွေ က .. ဒေါ်စုမှ ဒေါ်စု ဖြစ်လို့ … ပွဲမလှ ဖြစ် ကုန်တာ ….။ ၂၀၁၀ မှာက ..နည်းနည်းနဲ့ ..ရှင်းရှင်းလေး ကစားတာ …။ မဲမရတဲ့ ..နေရာတွေမှာ ..ညစ်ပုံကလည်း ..သိပ်ယဉ်တယ် …။ မကြမ်းဖူး … ဘယ်ကမှန်း..မသိတဲ့ … ကြိုတင်မဲတွေ ရောက်လာတယ်။
တဖက်က..၀င်စေချင်သယောင် ..ဟန်ဆောင်ပြီး ..တကယ်က မ၀င်စေချင် … ။
မ၀င်မှ .. ပွဲလှမှာကိုး။
ဟော …အခု အတိုက်ခံ..မရှိဘူး..လို့လည်း မပြောနိုင် …။ ပြောရဲလောက်အောင်လည်း … အင်အားမရှိ …။ ချည်ပြီးး.. တုပ်ပြီးသား… ။ ဟဲဟဲ … စည်းကမ်းရှိသော … ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကို..ချီတက်ကြစို့လေ …။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ .. လိုချင်ထားတဲ့ အကွက်ဟာ ..အပြီးမှ ..ပုံပေါ်လာတယ် …။
စာရေးသူ အပါအ၀င် ..အများက ..အင်န်အယ်ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ ..၀င်ရေး..မ၀င်ရေးကိုပဲ ..အာရုံစိုက်နေကြတယ် …။ မည်သူကမှ … မ၀င်ရင် ..ပါတီ register မလုပ်ရင် အင်န်အယ်ဒီ ..တရားမ၀င်တော့ဘူးဆိုတဲ့ … အကွက်ကို မမြင်ခဲ့ ဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်..ထင်တယ်..။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ..၉၀ ရလဒ် ကို ဖျက်ပစ် တဲ့ အပြင် .. အင်န်အယ်ဒီ .. တရားဝင်မှု ကိုပါ ဖျက်ပစ်လိုက်တယ် … ။ ဒီအကွက်ဟာ ..စစ်အစိုးရ.အတွက် .. အပိုအာမခံ..ဖြစ်တယ် … လိုအပ်ရင် … သုံးဖို့ ..ချန်ထားတဲ့..အကွက်လို့..မြင်မိတယ် …. လောလောဆယ် … အေးဆေး နေရင်..ဘာမှလုပ်စရာမလို …. အကယ်၍ ..ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု … ဖြစ်လာခဲ့ရင် .. အင်န်အယ်ဒီ ကို ကိုင်နိုင်အောင် .. တကွက်ကြို ကန်ထားတာလို့ ..ယူဆနိုင်တယ် ….
ဆန်ဇူးကပြောတယ် … ရန်သူ့အကြောင်းကို … သိပါစေ … ကိုယ့်အကြောင်းကို ..ကိုယ်သိပါစေ … တဲ့ .. ပေါတာ ကြီး..သန်းရွှေက.. အတိုက်အခံ..တွေအကြောင်း..အတိုက်အခံ.တွေထက်..ပိုသိနေ ပုံရ တယ်.. အမှန်က … စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး..တပ်ဖွဲ့မှာ ..လုပ်လာတော့ .. အနီတွေရဲ့…ရန်-ငါ-စည်း .. စိတ်ဓါတ်ကို …. ကောင်းကောင်းသိပုံရတယ် …. ဘယ်အကြောနှိပ်ရင် ..ဘယ်လက်ထောင်မယ်.. ဆိုတာ..သိနေတာကိုး …. အတိုက်အခံတွေရဲ့..ပြဿနာက …. လက်ဝဲသူငယ်နာမဆင်သေးတဲ့ .. အနီတွေရဲ့ … လောင်းရိပ်အောက်က ..ခုထိ..မထွက်နိုင်ကြသေး…. နဲနဲလေး ဖြစ်တာနဲ့ … မာတယ်ကွ ..မူအပေါ်ရပ်တာဟ … ဒင်းတို့က သစ္စာဖေါက်တွေ … သာယာစီးတွေ … စစ်တပ်သူလျှိတွေ … ဆိုပြီး..ဟိုလူ့လက်ညှိုးထိုး..ဒီလူ့လက်ညှိုး..ထိုးရင်း… စိတ်အာသာဖြေနေကြတာ … နောက်ဆုံး အဖြေရှာလိုက်ရင် ဘာရလဒ်မှ ..မပြနိုင်ကြဖူး …. နောက်အနှစ် (၂၀) အော်ရင်း … အသက်ကြီးပြီး သေသာသေကုန်ကြမယ် …. ရန်-ငါ-စည်း ကတော့လျော့မှာ အဟုတ်ကြဖူး …
မေးစရာရှိတာက .. နိုင်ငံရေး..လုပ်တာဟာ … မိမိစိတ်အာသာပြေဖို့လား? တိုင်းပြည်အတွက်လား? အနှစ်(၂၀)ကျော် အော်လာကြတာ ..ဘာထိရောက်မှု … ဘာတိုးတက်မှုရှိသလဲ? လို့မေးမိကြရဲ့ လား? နောက် မျိုးဆက်နှစ် ဆက်လောက်ဆိုရင် …ဗမာနိုင်ငံမှာလည်း ..ကွန်မြူနစ်တွေရှိတော့မယ် မထင်…
ဗျူဟာ..နားလည်တဲ့ သူတွေက … အကွက်နဲ့..ရွှေ့ တယ် … ထောင်ဖမ်းတယ်… တောခြောက် ဖမ်းတယ် … စိတ်ခံ စားမှု .. အီမိုးရှင်း ..မရှိဖူး .. ဆိုတာကို..နားမလည်ကြဖူး …. ဆေးစွဲတဲ့ သူတွေဟာ … တဒင်္ဂခဏ စိတ်ချမ်းသာမှုကို …. မထိမ်းနိုင်ပဲ ..ထွက်ပေါက်ရှာကြသလို …. လက်ဝဲအစွမ်း ရောက် တွေ ..ရဲ့ … အားနဲချက် က … ရန်-ငါ-စည်း …စိတ်နဲ့ … (ငါ) ဆိုတဲ့ … မာန..ကိုထောင်လိုက်ရမှ .. စိတ်ငြိမ်သွားကြတော့ …. အနီ..တွေကို …သိမ်းသွင်း ချေမုန်း ခဲ့ဘူးတဲ့.. ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ.. အတွက် လွယ် သွားရတာပါ …..
ရန်-ငါ-စည်း …စိတ်နဲ့တွက်ရင် … အဖြူ..နဲ့ ...အမဲပဲ ရှိတယ် … ကြားက ..မီးခိုးရောင်တွေ … ဘာတွေမရှိဖူး … မသိချင်ဖူး … ဒါကြောင့် ..ပရိယာယ်အကွက်..ဆင်..ထောင်ဖမ်းရတာလွယ်ကူတယ် .. လောကကြီးဟာ … ထင်တာ ထက် …နက်နဲ..ရှုပ်ထွေး..တယ်ဆိုတာ ကို..လက္ခံချင် ကြပုံမရှိ .. capacity နဲတာလည်း..ပါပါတယ် ….
အနီတွေရဲ့..အတွေးအခေါ်..အကျင့်အကြံ..တွေရဲ့…လောင်းရိပ်..အောက်က..မထွက်နိုင်သ၍ …မိမိက ..တဗန်း ရှုံးပြီးသား ……
တရုတ် စစ် ဗျူဟာပညာရှင် ဆန်ဇူး က သင်ကြားသွားတဲ့ အထဲမှာ … ရန်သူကို .. မတိုက်ရပဲ … နှိပ်ကွပ်နိုင်ခြင်း (သို့) စစ်အောင်နိုင်ခြင်း ..ဟာ … အရည်အသွေးစွမ်းရည်၏ အကောင်းဆုံး အမြင့်ဆုံးဟု …မှာကြားသွားပါသည်။ တချိန်ထဲမှာ … စစ်ပွဲတိုင်းဟာ .. (လှည့်ဖျား) မှု ဟုလည်း မိန့်ကြားခဲ့ပြန်တယ် ….
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ …. ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက … တကယ်က… ညာချိုးစေချင်တာ … သို့သော် ..ဘယ်ချိုးစေချင် သယောင် … ဖိန့်ဖိန့် ..လုပ်ပြလိုက်တော့ … ရန်-ငါ-စည်း … ခေါက်ရိုးကြိုးနေတဲ့ .. အတိုက်ခံ…တွေက … သူဖြူရင် ..ငါမဲ … သူမဲရင်..ငါဖြူ..ဆိုတဲ့… လှေနံဓါးထစ် .. တလမ်းသွား ..အတွေးအခေါ်နဲ့ … အလံထောင်ပြီး … ညာချိုးကာ ..ရဲရဲကြီးချီတက်..သွားကြတော့… ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေ..တယောက်..မပင်ပန်းပဲ ..လက်ပိုက်ကြည့်နေရုံပဲ…
ဒါ..ကျနော်..ဥါဏ်မှီသလောက်လေး … တွေးကြည့်မိတာပါ။
ဒီနေရာမှာ ..ကျနော်ဒေါ်စု..ကို အပြစ်..မတင်ရက်ပါ …. ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ က …အားလုံးကို ..ခူးပြီးခပ်ပြီးမှ ..ဒေါ်စုကို ကပ်ပြီး … လွှတ်ပေးလိုက်တာ…. ဒေါ်စုကို..ရွေးစရာ..လမ်း..မရှိအောင် .. အကွက်ဆင်ပြီးပြီ … ကျနော်က .. (လူ) ထက် (အတွေးအခေါ်) ကို ပို အပြစ်တင်ချင်တယ် … ဒီ..ရန်-ငါ-စည်း အတွေးခေါ်..အမှားကြီး ..ကို ရင်မှာပိုက်ပြီး … နေရာတကာ..ဒီပေတံနဲ့တိုင်း .. ဒီပေတံနဲ့ ဆုံးဖြတ် ..နေကြရင် ..ဆက်မှား..နေကြဦးမှာပဲ … သခင်သန်းထွန်း ..တို့ ကို .. ဂျောက်ထဲ..တွန်းချခဲ့ တာ..လည်း ..ဒီ.စိတ်ဓါတ်..ဆိုး..တွေပဲ …
ကျနော် ..ဖြေးဖြေးခြင်း … လူကြီးတွေလည်း ..ဘယ်လိုးမှား ..ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို ..ဖေါ်ထုတ်..တင်ပြ …ဆွေးနွေး သွားပါ့မယ် ….
အတိုက်ခံတွေ..ရင်ဆိုင်..နေရတာက … စစ်တပ်နဲ့ ..စစ်ဗိုလ်တွေ …
စစ်တက္ကသိုလ်.. အများစုမှ … ဆန်ဇူးရဲ့ ..ဗျူဟာအတွေးအခေါ်ကို … သင်ကြားကြရတယ် …
စစ်ဗိုလ်တိုင်းဟာ … စစ်ဗျူဟာ … စစ်ပွဲပလင် … ပြင်ဆင်မှု … logistic မရှိပဲ ..စစ်တိုက်လို့မရ…
အတိုက်အခံ ..အများစုက … စိတ်ခံစားမှု နဲ့ … အတင်း..ကျား..တက်ထိုးချင်ကြတာ … ရန်သူ့.. ထောင်ချောက် ကိုမမြင်လိုကြ ….
စစ်ပွဲမှာ … ရင်ဆိုင်..မတိုက်တိုင်း ..သတ္တိမရှိတာမဟုတ် ….
ရောမခေတ်က ..ဟန်နီဘား ..ဟာ ..စစ်တိုက်တော်ရုံမက … ရောမ သားတွေကို အသေမုန်းတယ် ..ထိပ်တိုက်စစ်ပွဲ ..အကြိမ်ကြိမ်ရှုံးတော့ …ရောမတွေက ..ထိပ်တိုက် ..စစ်မဆင်နွှဲတော့ … တဖြည်းဖြည်း ..ရှောင် တိုက်ရင်း …အမှဲ့ ချွေ ချွေ..သွားပြီး..အားယုတ်လာမှ ..အပြတ်ရှင်းတာ ….
ဒါကြောင့်..စာရေးသူဟာ … အကွက်..ကိုသတိရှိတာပါ … အကွက် ..က တဆင့်..ဗျူဟာ ကိုခန့်မှန်း လို့ရပါတယ် ….
လူငယ်လေးတွေ ..ဗျူဟာ..သတိ..ရှိနိုင်ကြပါစေ …
လူငယ်လေးတွေ … သတိပြုနိုင်ရန် .. ဆန်ဇူးရဲ့ .. ဟောာကြားချက် တချို့ကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်
All men can see these tactics whereby I conquer, but what no one can see is the strategy out of which victory is evolved.
ဇွန် .. ၁၀-ရက် ၂၀၁၁
To be continued … ဆက်ရန်ရှိပါသည် ….
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:41 AM0comments Links to this post